Indlu kaJuli-ukubuyela elwandle kunye nemibono emangalisayo - I-Airbnb
Indlu kaJuli-ukubuyela elwandle kunye nemibono emangalisayo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDonal
Indlu kaJuli yindlu ezimele, ezimele ejonge ulwandle. Ijikelezwe lunxweme olusemagqabini kunye nendawo yokuhamba endulini, ikwayimizuzu eli-10 yokuqhuba ukusuka kwiWild Atlantic Way, idolophu yaseWestport kunye neGreat Western Greenway. Likhaya eliqaqambileyo, elitofotofo kunye nelangoku. Indlu ibekwe kwiigadi ezintle zasendle ezinembono yeCroagh Patrick, intaba engcwele yaseIreland. Ngazo zonke izixhobo zale mihla, ibandakanya ipatio yangaphandle kunye nendawo yebarbeque ecaleni kolwandle.
Indlu yethu ilungile kumaqabane okanye abo bafuna indawo efihlakeleyo ukuba babaleke kuyo yonke into. Inekhitshi / indawo yokuhlala enkulu, ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye ineembono ezizukileyo zeRosmoney Bay. Kukho igumbi lokulala elikhulu elijongene nolwandle. Igumbi lokuhlambela lineshawa yokuhamba kunye nokufudumeza ngaphantsi. Indlu inenkqubo yokufudumeza egcweleyo kunye nesitovu esibaswa ngamaplanga ukuze ithobe! Umgangatho oki waseFransi.
Iingcango eziphindwe kabini zivula kwindawo yokuhlala ukuya kwipatio enelanga yeflegi. Kukho indawo yesibini yokuhlala ngaphandle ngasemva kwendlu ejonge ngqo eCroagh Patrick, intaba engcwele yaseIreland.
4.99 · Izimvo eziyi-201
Kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kunxweme lolwandle kukho uthotho lweendlela ezijikeleze i-cove kunye ne-inlets yaseClew Bay ekumgama wokuhamba wendlu.
Sihlala kwindawo enobuhlobo kakhulu eneklabhu yesikhephe, i-pier kunye neendawo zokujonga ezintle kwimizuzu nje yendlu.
Umbuki zindwendwe ngu- Donal
Indlu eyethu ikumgama nje weemitha ezingama-30 ngoko siyafumaneka ukuze sincede ngayo nayiphi na indlela ukuba kuyafuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Westport